China abenzi panel-YA204 kunye nabathengisi Yingjiwei
Ukuxelisa iphaneli yemarble
Ukubetha ipaneli yobugcisa
Iphaneli yokushicilela ye-UV
Iphaneli yengqolowa yeenkuni
Ukubetha ngenqindi iphaneli yobugcisa YA602
Iphaneli yokumodareyitha YA312
Iphaneli yokumodareyitha YA311
Iphaneli yokumodareyitha i-YA104
Ukuxelisa ipaneli yemarble YC104
Ukuxelisa ipaneli yemarble YC103
Ukuxelisa ipaneli yemarble YC102
Ukuxelisa ipaneli yemarble YC101
Iphaneli yokutya okuziinkozo yeYC205
Iphaneli yokutya okuziinkozo yeYC203
Iphaneli yokutya okuziinkozo yeYC202
Iphaneli yobusi YB102
Ilizwe lemvelaphi: China
Amagama orhwebo: EXW, FOB, Lwemipu kunye CIF
Ixesha Lead: iintsuku 7-20 kuxhomekeke kubungakanani.
Izibuko yokulayisha: Guangzhou okanye Shenzhen
Imiqathango yeentlawulo: T / T okanye L / C.
Iimpawu zepaneli ye-aluminium eqingqiweyo
1. Ubunzima bokukhanya, ukuqina okuphezulu kunye namandla.
2. Ukuxhathisa kakuhle kwemozulu kunye neepropati zokulwa ukubola.
3.Ingacutshungulwa ibe ziimilo ezinzima njengoko kuyilo ngalunye
4. Ii-multicolors ezininzi onokuzikhetha.
5. Easy ukucoca kunye nokugcina.
6. Kulula ukuyifaka.
7. Ukulungelwa okusingqongileyo, kunokubuyiselwa kwi-100%.
Iphaneli yeAluminiyam eqingqiweyo iqhutywa ngemingxunya eyahlukeneyo okanye iipateni ezahlukeneyo kwiipleyiti zealuminium ngomatshini wokukrola. Ngokusetyenzwa kokukrola, iipleyiti zealuminium tyaba zinokuqhubeka zandiswa ngengqondo yendawo kwaye zinemisebenzi yokuhambisa ukukhanya kunye nomoya. Utshintsho kunye nemidlalo eyahlukeneyo engaphandle yonyango olukhethekileyo, isenza ukuba umgca uphile kwaye ube mhle. Ngokungafaniyo nembono yemodeli yesiko, ilunge ngakumbi kwiiklabhu ezahlukeneyo zale mihla, ukuhonjiswa kwekhaya kunye neeofisi.
Iphaneli ye-aluminium eqingqiweyo inokubonwa njengeplate ye-aluminium engenamngxuma, inokunqunyulwa ize ikrolwe umngxuma ngobunzima be-10.0mm, kwaye ii-equiments zisebenzisa umatshini we-CNC. Ikakhulu esetyenziselwa izinto ezahlukeneyo, yindlela efanelekileyo yokusebenza yokusika i-precisioin ephezulu ephezulu, ifomathi enkulu kunye neepateni zemilo ekhethekileyo. Iphaneli ye-aluminium inokukrolwa kwi-aluminium engaqhelekanga yokufaka i-aluminium yobukhulu obahlukeneyo kunye nemilo yoyilo lwabathengi. Kwaye inokwenziwa kwiipateni ezahlukeneyo ezinjengeesilingi, udonga lomkhusane, ikholamu njalo njalo.
Iintlobo Ukuhlukunyezwa art ngokwenene: Ukuhlukunyezwa ipateni, ukwakha Ukubetha, Ukuhlukunyezwa enzima, Ukuhlukunyezwa ultra ezingcakacileyo, micro Ukubetha imingxunya, umgca ukusika Ukubetha, laser Ukuhlukunyezwa, njl
Siyayihlonipha indalo kwaye siyangqinelana nomgangatho woyilo oluphezulu lwendalo. Xa ukwenziwa kwemizi-mveliso kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini kuyitshintshile indawo esihlala kuyo, amagcisa ethu azama ukufumana indawo elungelelanisiweyo kunye nokuzihlaziya, avelise indalo yesibini, kwaye enze ubuhle bendawo esihlala kuyo. Ezifana nokupeyinta okukroliweyo okwahlukileyo kwenkcubeko yasezidolophini, uyilo lweempawu, imbonakalo yomhlaba, umoya ophawu. Amagcisa ethu alushicilela ngononophelo utshintsho lwesixeko.
Igama lemveliso Iphaneli eqingqiweyo yeAluminiyam
Into No. YA204
Izinto eziphathekayo IAluminiyam
Ingxubevange yeAluminiyam I-1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Unyango oluphezulu Ukutyabeka kwePVDF / ukutyabeka Powder / i-Anodized
Umbala Nawuphi na umbala weRAL, imibala eqinileyo, imibala yentsimbi
Ukutyeba I-2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Ubungakanani I-600 x 600mm / 600 x 1200mm / 1300 x 4000mm / ubungakanani obulungelelanisiweyo
Ukupakisha Ikreyiti iinkuni Standard kwamanye amazwe
Iqhubekekisa iindlela Ukupheka, ukusika, ukusonga, ukugoba, ukugoba, ukudibanisa, ukuqinisa, ukugaya, ukupeyinta kunye nokupakisha.
Izicelo Ifanelekile ngaphakathi nangaphandle, imiqadi kunye neekholamu, iibhalkhoni, i-awnings, indawo yokulinda, ihotele, isibhedlele, isakhiwo sokuhlala, i-villa, isikhululo, indawo yokuthamba
Egqithileyo Iphaneli egqunyiweyo-YA313
Okulandelayo: Iphaneli yobusi YB101
USodolophu weSixeko saseDingxi, kwiPhondo laseGansu ...
Inkampani: Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium zokwakha Co., Ltd.
Idilesi: No. 1, Hejing South Road, Isigaba 1, Hegui Ind. Indawo, Heshun, Lishui Idolophu, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong, China